सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छ’न महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउ’नुपर्ने - Samachar Post Dainik
एजेन्सी । भनिन्छ : मानव जीवनलाई सफल बनाउनका लागि चाहि’ने आधारहरु मध्ये यौ’ ’न पनि एक हो ।
यौ’न मानव जीवनको एक नियमित प्रकृया भएका कारण यो कुनै जटिल वा फराकिलो विषय होइन, जति आम मानिसले यसलाई कठोर सम्झि’रहेका छन् ।
यौ’न सन्तोत्पादन गर्ने प्रकृयामात्र नभएर शा; रिरीक तथा मानसिक खुसी दिलाउने एक बलियो सम्बन्ध पनि हो । त्यस कारण पनि यसले मानव स्वा’स्थ्यलाई फाइदा नै पुग्ने गर्छ ।
तर आजहामी एउटा नयाँ वि’षयमा चर्चा गर्दै छौं ।
किन की वीर्यस्खलन पछाडि थकित पुरुषले महिलासँग अन्तरंग नगर्ने गरेकाे विभन्न अनुसन्धानले देखाउँदै आएका छन् । त्यसकारण पनि अधिकांश पुरुषहरुले यौ’ ‘’नसम्पर्कपछि महिलासँग सहवासको अनुभव साट्ने गर्दैनन् ।
जसले गर्दा सहवासमा साथ दिइरहेको आफ्नो पार्टनरले से’ ‘क्स पछाडि के सोचिरहोला ? उसलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्नेमा पुरुष’हरुले हेक्का राख्दैनन् ।
२ सय ३० महिलाहरुमाथि गरिएको अनुसन्धानमा धेरै महिलाहरुले यौ’ ’न सम्पर्कपछि तनाव र निराश महसुस गरेका थिए ।
कयौं महिलाहरु यौ’ ‘न सम्पर्कपछि बाथरुममा रुने पनि गरेको अ.नुसन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन् ।
कुनै–कुनै महिलाहरुमा यो स’मस्या धेरै रहेको र कुनैमा थोरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यौ’ ’नपछि आफ्नो महिला पार्टनको निधार चुम्ने, सुम्सुम्याउने र अंगालोमा राखेर मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो भने उनीहरु खुसि हुन्छन ।
महिलाहरु पुरुषको तुला’माना ज्यादै भावानात्कम र समावेदनशिल हुने भएका कारण यी कुराहरुको ख्याल पुरुष पा’र्टनरले राख्न आवश्यक ठानिन्छ ।
प्रकाशित मिति ३० पुष २०७८, शुक्रबार ०३:३३